Fitempotempon’ny Tontolombolongana Saodiàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Septambra 2018 12:20 GMT
Ka, inona ny zavatra tena mahaliana izay noresahin'ireo blaogera saodiàna nandritra ny fito andro? Ndeha ho ao anaty tontolombolongana saodiana isika no hanao ny fitsidihana isan-kerinandro fanaontsika mba ahitana azy.
Miresaka ny zavatra niainany niaraka tamin'ny toerana misy ny tontolombolongana saodiana ankehitriny i Aya, milaza fa tena marisika izy amin'ny fahitàna an'ireo blaogy saodiàna maro mahaliana sy ny voasoratra tsara. “Na dia zavatra tsy mora aza matetika ny raharaha ho an'ireo blaogera Saodiàna, ny finiavan'ireo blaogera saodiana dia mandroso sy miroborobo. Ny aterineto, aorian'ny zavatra rehetra, dia tsy misy fetra faratampony ary azon'ny tsirairay atao foana ny mahita fomba hialàna ny sivana”. Hoy izy nanampy.
Manana lahatsoratra iray masiatsiaka mikasika ireo vehivavy mamily fiara (Arabo) ny Mo5 o 7ekma:
Eny, tiako ny hanana fiara ahy manokana ary tiako izaho ihany no hitondra azy. Na ianao, na olon-kafa eto amin'ity tany ity dia tsy misy manana zo hanakana ahy amin'ny zavatra iray izay tsy sakanan'ny finoako akory. Tsy misy ihany koa fanamarinana marimpototra mikasika an'io fandraràna io. Hoy aho, takianay ny fahafahan'ireo vehivavy hamily fiara satria zonay izany, ary ampy izay.
Na izany aza, milaza ihany koa izy fa halany ireo olona tsy Saodiàna izay monina ao Arabia Saodita miresaka an'io lohahevitra io, manandrana mandalina, mitsikera ary manameloka, satria, amin'ny ankapobeny, tsy ampy famakafakana fomba fijery sy fanamarinana ny fandalinan'izy ireo ” ary na dia ananany aza izany, resaka raharahan-tokantrano foana izany”, hoy izy nanampy.
Eo amin'io lohahevitra io ihany, nanoratra ihany koa i Aya hoe:
Ny fitondràna fiara kely fitondra milalao golf ao anaty sehatra hetsika iray efa mitokana sahady dia mety ho toy ny olana tsy misy dikany ho an'ny sasany, kanefa, tsy ho izany mihitsy ho an'ilay misoratena manohitra izao zavatra rehetra izao mifandraika amin'ny fandrosoan'ny ankolafin'ny vehivavy. Tsotra fotsiny ny lojikan-dry zareo: raha mamily fiara fitondra milalao golf ireo vehivavy androany, dia haniry hitondra fiara tena izy ireo rahampitso, azo antoka, fahotana iray lehibe tokony hofongorina faran'izay haingana izany.
Taorian'ny fitsidihana vao haingana tao Djeddah sy tao La Mecque, tsy afapo mihitsy ny @tz3naf tamin'ny haratsin'ireo làlana ao an-tanàna izay fantatra amin'ny anarana hoe “Vehivavy Mpanambadin'ny Ranomasina Mena”. “Izahay, vahoakan'i Arabia Saodita, dia heverina ho mahazo tombontsoa avy amin'ny fiakaran'ny vidin-tsolika ary tsy manohy manao an'ireo fanampiana an-dry zareo Palestiniana na manangana indray izay nopotehan'ny Amerika tao Iraka sy Afganistan. Azo hanovàna endrika an'i Djeddah ny antsasaky ny fanampiana izay nomena an'i Palestina”, hoy izy nanoratra. Tamin'ny fandehanana tany La Mecque, lazainy fa tsy mahatsapa ho toy ny ao amin'ny taniny akory ny Saodiana iray (Arabo), satria betsaka loatra ireo Afrikana. Matetika tonga hanao fivahinianana izy ireny, nefa avy eo mitkona mipetraka tsy ara-dalàna ao amin'ny firenena mba hiasa anatin'ireo asa sasany toy ny fangatahana. “tsy ho mpangataka fotsiny izy ireo, fa aparitak'izy ireo ao amin'io tanàna masina io ihany koa ny alikaola, ny rongony, ny fanompoantsampy sy ny fivarotantena”, hoy izy nanampy.
Mitanisa zavatra folo izay tiany mikasika an'i Riyadh i Ubergirl, anisan'izany ny Saks Fifth Avenue sy ny fahafahanao mitanina andro rehefa volana Desambra. Mandritra io fotoana io, maka fotoana i Leeno hanomezana antsika topimaso momba ny fiainan'i Riyadh amin'ny alina.
Taorian'ny famakiana ilay boky “Banat Al-Riyadh” nosoratan'i Raja Al-Sanea ary niteraka adihevitra be, hoy i Ahmed hoe (teny Arabo): “mamaky isika na mandre isanandro mikasika ireo tanora midoroka rongony, misotro toaka, ary mamono tena koa aza, fa tsy hitantsika akory ny fifanoherankevitra mitovy amin'izay manodidina an'io boky io. Satria ve vehivavy ireo mpilalao fototra ao anatin'io boky io, sa satria vehivavy no mpanoratra, sa satria fotsiny isika mihevitra fa ny fiarahamonintsika dia tena lafatra?”
Mandray ny fiakaran'ireo silamo eo amin'ny fitondrana ao amin'ny Tontolo Arabo ny Prometheus (ny fandresen'i Hamas tao Palestina sy ny fandresen'ireo Silamo tamin'ireo fifidianana monisipaly tao Arabia Saodita, mba tsy hitanisàna an'ireo ohatra sasantsasany). Mihevitra izy fa efa nampoizina izany. Milaza izy fa mandritra ny vanim-potoanan'ny krizy, nanam-pikasana ny hikaroka fialofana tany amin'ny fivavahana ny olona. Manohy miresaka ireo loza manambana ny maripamantarana anay ireo silamo, izay mitarika ny olona ho mpino kokoa, sy hanaraka anjambany fotsiny an'ireo izay miseho miresaka amin'ny anaran'ny fivavahana. “Tsy misy idiran'ny Silamo (Arabo) io politikan'ny herisetra rehetra mitranga manodidina antsika io“, hoy izy manoratra. “Tetezamita ampiasain'ireo mpanao herisetra io mba hahazoana fahefana sy hifehezana ny lahatry ny vahoaka. Tsy miahotra izy ireo na dia iray minitra monja aza isaky ny manao heloka bevava mba hahatongavana amin'ny tanjon'izy ireo, dia ny hakàna ny fitondràna”, hoy izy nanampy.
Amin'ny alalan'ny fanandramana manazava amina namana iray fa samy mametraka ny fetra azy ireo daholo ny tsirairay amin'izay efa irian-dry zareo hanaovana vivery ny fiainany any ankoatra, manoratra i June hoe:
Olona ihany koa ireo miozolomana ary afaka manao fahadisoana toy ny olona hafa rehetra izy ireo. Maha-tezitra ahy io satria rehefa manomboka miresaka tahaka izany momba ireo miozolmana ny miozolomana, maneno ohatran'ireo kristianina sy jiosy izy ireo rehefa miezaka mitsikera an'ireo miozolomana raha vao manao ny tsy mety ry zareo.
Farany, ndeha isika hifaly miaraka amin'i Saudi Future, izay miresaka amintsika ireo karazana mpampianatra samihafa, ary manome ihany koa ny fomba tsara indrindra hiatrehana ny tsirairay amin'ireny 🙂